MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 899
>Memorial Service for passing of WIn Maw Oo 22 years held in Rangoon
>Art Works smuggled from Insein Jail from political prisoner students
> ထောင်ထဲက အင်္ကျီပေါ်က လက်ရေးပန်းချီ အမှတ်တရ (မျိုးဆက်သစ် ဗကသ ကျောင်းသားများအတွက် အမှတ်တရ ဆွဲထားတာ ဖြစ်ပုံရပါတယ်) အောက်တ်ိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈ No tags for this...
> Poster Protest from Rangoon October 10th 2008 No tags for this post. Related posts No related posts.
>Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 03
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 03October 9th 2008(Reuse … )...
>Myanmar Burmese Journals Headlines Digest – 9th Oct 2008
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ အောက်တိုဘာ ၉၊ ၂၀၀၈ တရုတ်နို့ထွက်ပစ္စည်းများ တားမြစ်အပြီး ပြည်တွင်း နို့ဈေးများ မြင့်တက်။ ၀က်အရှင်များကို အိန္ဒိယမီဇိုရမ်က ၀ယ်လိုသည်။ ဆိတ်အရှင်များကို...
> လှောင်အိမ်ထဲက လွတ်လာတဲ့ ခြင်္သေ့ကြီး မောင်စွမ်းရည် အောက်တိုဘာ ၉၊ ၂၀၀၈ သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် ထောင်က လွတ်လာပြီဆိုတော့ ဦးလေးနဲ့ ဒေါ်ဒေါ် (လူထုဦးလှ နဲ့ ဒေါ်အမာ)တို့ကို ပြေးပြီး သတိရလိုက်မိပါတယ်။...
>MoeMaKa Radio Sydney – Oct 5th 2008
> ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၈ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ် မုန်တိုင်းအပြီး နယ်မြေအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားသည့် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပိဋကတ်သုံးပုံ ဒီဗီဒီ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် တစည ပါတီ စသည့် မျက်မှောက်ရေးရာ...
>Win Pe Bag – 2
> ဝင်းဖေလွယ်အိတ် အမှတ် ၂ ကျနော့် ဖခင် ရွှေပြည်ဦးဘတင် ၀င်းဖေ အောက်တိုဘာ ၈၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များခင်ဗျား။ “ဝင်းဖေလွယ်အိတ်” အစီအစဉ် အမှတ် ၂ ကို တင်ဆက်ပါတော့မယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က...
>Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 02
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 02 October 8th 2008 (Play...
> နာဂစ်ဘေးသင့် ကလေးသူငယ်များ စောင့်ရှောက်ရေး အတွက် ဆရာတော်၊ တကာများ ဒုတိယအကြိမ် လှူမျှဝေ ခရီးဆက်ခဲ့ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ အောက်တိုဘာ ၈၊ ၂၀၀၈ နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် မိဘမဲ့ ကလေးများအား...
>Joy – Poem – Food
> အစာ ဂျေအိုဝိုင် အောက်တိုဘာ ၈၊ ၂၀၀၈ ကြယ်နီတွေရဲ့ ဒုန်းဆိုင်းသံ တသဲ့သဲ့ ကြားက လသွား နှစ်ထပ်တပ် မြှားတစ်စင်းကို အပြုံး တရာသီနဲ့ ရော လွှတ်ခဲ့တယ်။ ပျား ခြောက်ကောင်ကို...
>Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 01
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 01 October 7th 2008 (Organize...
>Cartoon Beruma – Underage Smoking in Burma
> Cartoon Beruma – Underage Smoking in Burma October 7th 2008 No tags for this post. Related posts No...
> အရှေ့နဲ့အနောက် ဆုံကြရာဝယ် – အရင်းရှင် ဆိုရှယ်လစ်စနစ် နဲ့ ဆိုရှယ်လစ် အရင်းရှင်စနစ် မောင်ရစ် အောက်တိုဘာ ၇၊ ၂၀၀၈ အမေရိကန်မှာ စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုက်ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ အိမ်ဈေးတွေ ဖောင်းပွ၊ အရင်းရှင်များက...
> သေနတ်တဖက် ကလောင်တဖက် တာရာလင်းယုန် အောက်တိုဘာ ၆၊ ၂၀၀၈ ဗမာပြည်တွင်စစ်ဗိုလ်များ တမိုးလုံးဖျောက်ဆိတ်ဖြစ်နေသည်။ ကြာပြီ။ သို့သော် ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာဖြစ်နေသည်က စာပေလောကဖြစ်သည်။ စာပေ-မီဒီယာလောကမှာ စစ်ဗိုလ်များ၏မိုး ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုလိုက်လျှင် အခြားနိုင်ငံများမှ...
>Cartoon Beruma – May Force be with you … Coz you all are on your own
> Cartoon Beruma – May Force be with you … Coz you all are on your own October 7th...
> ကျွန်ုပ်နှင့် တဆယ်လမ်းကြောင်း ရန်လိုကျွဲ အောက်တိုဘာ ၆၊ ၂၀၀၈ မြန်မာပြည်သို့ သွားရပြန်လေပြီ။ ယခုတကြိမ်တွင်လည်း အထူးဖိတ်ကြားခံရခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂ ညီလာခံတွင် ကျွန်ုပ် ဆွေးနွေးပြောဆိုနေသည့် ဓာတ်ပုံတပုံကို ဘန်ကောက် မြန်မာသံရုံးက ရသွားသဖြင့်...
>Cartoon Pe Thein – His classic cartton
> ကာတွန်း ဖေသိန်း – ဘယ် “ဆန်” ဖြစ်ဖြစ် လိုချင်သည် (ပြန်လည်ဆန်းသစ် ကာတွန်း) အောက်တိုဘာ ၆၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related...
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ အောက်တိုဘာ ၆၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၉ နာဂတိုင်းရင်းသားပွဲတော် လဟယ်တွင် ကျင်းပမည် စင်္ကာပူက ဒူဘိုင်းပညာသင်ဆု မြန်မာများ လျောက်ထားနိုင်ပြီ ရန်ကုန်မြို့...
> မြန်မာပြည်မှ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် နိုင်ငံတကာသို့ခြေချမိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃အောက်တိုဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ ဒါရိုက်တာကြည်ဖြူရှင်ရိုက်ကူးဖန်တီးသည့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကားတခုသည် National Geographic အဖွဲ့ကြီး၏ ရုပ်ရှင်ပြပွဲအတွက် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်တွင် ယနေ့ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့မှ ပန်းချီဆရာ...
>Nyunt Htwe – Rangoon under the watchful eye of the Junta
> ၀င်သက်ထွက်သက်များ … အမြဲ ငါကြည့်နေတယ် … ရန်ကုန် ညွန့်ထွေး အောက်တိုဘာ ၆၊ ၂၀၀၈ ရန်ကုန်ရဲ့ မွန်းကြပ်မှုတွေ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ နေ့တဓူဝ ဒုက္ခတွေကို သတင်းပို့ရတာ၊ သတင်းရေးရတာကို ငြီးငွေ့လှပြီလို့...
> Cartoon Beruma – How Junta exchanged arms with peace? When the monks protested in peace, we opened fire...
> စိတ်တေလေ ညံအူး အောက်တိုဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ ဟောဒီလူသားတွေပေါ့ ဒေါသတွေ မျိုမျိုချ သက်ပြင်းတွေ တဟင်းဟင်းချရင်း တင်းထားရတဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးတွေ တရိပ်ရိပ် ထိုးမကျရလေအောင် ကြိုးစားပြီး ရှင်သန်နေရတာ။ ဘဝင်ကျစရာ မရှိတဲ့ဘဝမှာ...
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၉) ဆရာ မင်းသုဝဏ်၏ အရေးတော်ပုံ မှတ်တမ်းများ ထိန်လင်း အောက်တိုဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်ဟာ ပထမ ကျောင်းသားသပိတ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ၁၉၂ဝ မှာ အသက်...
> အမျိုးသမီးအာဇာနည် ကျောက်ဆည်ဒေါ်မြရီ အသက် ၉၀ ပြည့်ပြီ ကြည်ကိုလွင် (ကျောက်ဆည်) အောက်တိုဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ (အပြည့်အစုံကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ပါ။) No tags for this post....
> “ပြောင်းလဲလိုက်ဖို့ ကျနော်တို့ ၀န်မလေးဘူး” ဘီဘီစီသတင်းဌာနနှင့် ဦးဝင်းတင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် အောက်တိုဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များခင်ဗျား၊ ဒီတပတ် မြန်မာ့အရေး ကမ္ဘာ့အရေး အစီအစဉ်မှာကတော့ အင်းစိန်ထောင်ကနေပြီးတော့ ပြန်လွတ်မြောက်လာတဲ့၊ အန်အယ်လ်ဒီပါတီကို စတင်ထူထောင်ရာမှာ...
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (အမှတ် ၂၄၇) ဒေါ်မေရှင် အမှတ်တရ (၄) မာမာအေး အောက်တိုဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ ဒေါ်မာမာအေးက ယခုတပတ် ရေဒီယိုဆောင်းပါးတွင် “ကျေးစေတမန်”သီချင်းအကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။ အလင်္ကာကျော်စွာ ရွှေပြည်အေးက...
> ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခန်း (၁၀) အောင်ဝေး အောက်တိုဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ ‘ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေ’ ကျနော်တို့သင်္ဘော ကျုံမငေးဆိပ်ကမ်းကို ၀င်လာပြီ ဆိုကတည်းက ကျုံမငေးမြို့ လူထုကြီးရဲ့ ကမ်းလုံးညွတ် ကြွေးကြော်နေတဲ့...
>Burmese Saffron Revolution Remembered – One Year Later Part 5
> Burmese Saffron Revolution Remembered – One Year Later Part 5Downtown Rangoon, 28th Septmeber, 2008 No tags for this...
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 18 No tags for this...
>Artist Htein Lin – One Year Later Poem
> တနှစ် ပြီးတဲ့နောက် ပန်းချီ ထိန်လင်း အောက်တိုဘာ ၃၊ ၂၀၀၈ ညီမလေး၊ ဆိုင်း(န်) မ အင်(န်)ခင် ကထဲက၊ ကြည့်ထားရမှာက ဇောက်တွေက ဘယ်မှာ ဒေါက်တွေက ဘယ်မှာ ဗျောက်တွေက...
Page 899 of 947«1...897898899900901...947»